Qaahira: Kulanka Mubarak iyo Yusuf
Madexweyne Cabdullahi Yusuf si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey Qaahira
Markii wafdiga Soomaalidu uu ka degey garoonka Dayuuradaha ee Masar dadkii halkaasc ku soo dhaweeyeryv waxa ka mid ahaa Wasiirka Arimaha Dibadda ee Masar, Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta iyo madax kale oo badan.
Islamarkiiba waxa wafdiga loo gudbiyey Qasiriga Madexweyneha ee ku yaal Madrasa Jadiid, halkaas oo Madexweyne Xusni Mudaarak uu ku qaabiley Madexweyne Cabdullahi Yusuf iyo wafdigiisa.
Waxyaabaha labada madexweyne ay is-xasuusiyeen waxa ka mid ah xiriirka soo jireenka ajh ee Soomaaliya iyo Masar ay sanooyinka badan wadalahaayeen.
Wariyaha BBC-da uga soo waramay Qaahira ayaa sheegey in soo dhaweynta wafdiga Soomaalidu ay ka heleen Qaahira ay markhaati ka tahey kalgacalka ay Masar u heyso shicibka Soomaalida.
Madexweyne Cabdullahi Yusugf waxa uu markii hore la kulmey Madexweyanaha dalka Masaarida ka dibna galinkiidambe ee Isniinta ayuu la kulmey Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabata, Camar Mussa.
Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta Amr Musa ayaa qado sharaf u sameeyey wafdiga Soomaalida.
Kulanka Madexweyne Cabdullahi Yusuf iyo Camar Mussa waxa uu ka dhacey qado sharaf wafdiga Soomaalida loogu sameeyey Hoteelka al-Xayat ee Qaahira. Wararka ka imaanaya Qaahira waxa ay sheegayaan in Jaamacadda Carbtu ay niyad fiican iyo qalbi furan ku soo dhaweysey wafdiga Madexweyne Cabdullahi Yusuf.
Wafdida Madexweyne Cabdullahi Yusuf waxa uu Jaamacadda Carabta ooy u sheegeen in Soomaaliya ay u baahantahey dib u dejin iyo dib u dhis, ooy Jaamacadda Carabta ka filayaan iney taageero siiso Soomaaliya, si maleeshiyada dalka joogta hubka looga dhigo, xasiloonina waddanka dib loogu soo celsho.
Waxa jirtey in shir heer wasiir ahaa oo Ururka Carbtu uu dhawaan yeeshey uu ku faaqidey arimaha la xiriira kaalmeynta Soomaalida oo laga hadley in Madexweynaha, dowladda iyo baarlamanka Soomaalida ee cusub la gargaaro. Waxa shirlaas laga sheegey in dowladaha Carbeed een weli ku dhawaaqin gargaarista Soomaaliya ay shirka la iskugu imaan doono Algeria ku soo diyaariyaan waxa ay Soomaaliya ugu talagaleen.
Waxa kale oo wafdiga Soomaalida iyo madaxda Masar isku soo qaadeen maadaam ay Masar iyo Soomaaliya xiriir soo jireen ah oo dhinacyo badan leh ay lahaayeen in Masra ay dardar galiso arimaha lagu kaalmeenayo Soomaaliya.